Shiinaha Oo Canbareeyay Dayacaada Maraykanka Ee Corona-virus. – Heemaal News Network
Wasiirka Arimaha Dibada ee China ayaa weerar ku qaaday habdhaqanka masuuliyiinta Maraykanka ee dhinaca coronavirus, waxana uu si wayn u dhaliilay dacaayadaha ka imanaya Maraykanka ee caabuqan Covid-19 ay ku naanayseen “Chinese virus” ama “Wuhan virus”, waxana uu carabka ku adkeeyay in ay tani tahay mid ku talagal ay u samaynayaan Maraykanku.
“Qaar ka mid ah masuuliyiinta iyo siyaasiyiinta sare ee Maraykunku waxa ay wali wadaan dacaayado ay buunbuuniyeen oo aydulucdoodu tahay in ay dunida ka takooraan Shiinaha, sharaf dhac wayn iyo xadgudubna ku ah dadka dalkeena Shiinaha” ayuu yidhi Wasiir Geng Shuang.
Xidhiidhka ka dhaxeeya Shiinaha iyo Maraykanka oo markii horaba ahaa mid aad u liita ayaa maalmahan dambena sii xumaaday kadib markii labada dalba ay is waydaarsadeen cambaarayn iyo eedaymo uu midba midka kale ugu xambaariyay masuuliyada iyo faafitaanka xanuunka covid-19.
Ciyaarihii Olymbikada Adduunka Ee Sanadkan Oo Dib Loo Dhigay.